Ciidamada Dowladda oo dad ku laayay magaalada Muqdisho. | raascasayrmedia.com
← Xisbi loogu magacdaray Dimuqraadiyada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo Muqdisho looga dhawaaqay
War-murtiyeed looga hadlay Somaliya oo kasoo baxay kulanka M/Afrika →
January 31, 2011 · 7:05 pm
Ciidamada Dowladda oo dad ku laayay magaalada Muqdisho.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya tacashiirad maanta ka dhacday Isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho oo kamid ah meelaha ay dowladda KMG ah ka maamusho magaalada.
Khasaara aad u xoogan ayaa ka dhashay rasaas ay ciidanka dowladda ku fureen goobo ganacsi oo ku yaal Isgoyska banaadir, dhimashada iyo dhaawaca ayaa sii cagacageynaya ilaa iyo 45 oo dhamaantood ahaa dadkii ku sugnaa goobaha ganacsiga iyo qaar wadada lugeynayay.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Askari katirsan ciidanka dowladda uu rasaasta ka dhacda qoriga lidka diyaaradaha ee Zuuga ku fooraariyay goob ay shacabku ku badanyihiin kadibna uu goobta ka baxsaday.
Sida wararku sheegayaan xiisad u dhaxaysay ciidamo kawada tirsan dowladda ayaa saaka ka jirtay isgoyska banaadir kadib markii Askari katirsan PS-ta uu toogtay Askari kale waxaana halkaasi ka dhacay wax u eg xasuuq oo ay ku kaceen ciidanka dowladda.
Saraakiisha caafimaadka ayaa soo weriyay in dadka dhintay ay sii caga cageynayaan 14 qof halka dhaawacu uu ka badanyahay 40 qof oo qaarkood dhaawacya culculus qaba, wasiirka arrimaha gudaha oo hadlay wuxuu sheegay in ay baarayaan sababta waxaasi u dhexeen wuxuuna ka gaabsaday in ay talaabo qaadayaan iyo inkale.
Muqdisho weli kama dhicin fal kan lamid ah oo ay koox kamida dhinacyada ishaya ugaysatay shacabka degan deegaanka ay maamusho marka laga reebo in madaafiicda AMISOM ay shacab badani ku dhintaan